Maxaa laga filan karaa shirka G20 oo waxbadan ku hoos duugan yihiin? – Bandhiga
Maxaa laga filan karaa shirka G20 oo waxbadan ku hoos duugan yihiin?
Shirka G20 oo ay ku kulmaan dalalka horumaray ayaa ka socda magaalada Buenos Aires ee caasimada Argentina, halkaasi oo ay gaareen dhamaan hogaamiyayaasha 20ka wadan ee caalamka ugu horumarsan dhanka wax soo saarka.
Kulanka maanta ayaa ah mid kusoo beegmay xili ay xiisado kala duwan ay caalamka ka taagan yihiin, waxaana kamid ah qodobada laga cabsi qabo in shirkan ay carqaladeeyaan xiisada ka dhex taagan Maraykanka iyo China ee dagaalka ganacsiga, xiisada Ruushka iyo Ukraine oo uu todobaadkii hore iska horimaad ku dhexmaray nawaaxiga Crimea.
Madaxda ayaa waxa ay aad ugu kalaa qeeybsameen mowduucyada isbedelka cimilada, ganacsiga iyo dilkiI loo geystay weriye Khashoggi.
G-20 waxaa ku bahoobay ilaa 19 dal oo ah kuwa ku hormaraya dhanka warshadaha iyo Midowga Yurub.
Shirka wadamadaan ayaa waxaa la bilaabay sanadkii 2008-dii waxa ayna xubnaha ka tirsan fursad u siinaysaa in ay ku xalliyaan arrimaha siyaasadda ee ugu waaweyn oo markaasi tagan.
Shirkan ayaa sidoo kale ah shirweynihii ugu horeeyey oo uu ka qeyb galayo Dhaxal-sugaha Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan tan iyo dilkii suxufi Jamal Khashoggi, MBS ayaa ahaa hogaamiyihii ugu horeeyey oo taga magaalada Buenos Aires Arbacadii lasoo dhaafay, waxaana la filayaa in qaar kamid ah hogaamiyayaasha caalamka ay kala hadlaan xiisada ka dhalatay dilkii Khashoggi iyo dagaalka ka socda wadanka Yemen.